Frankofonia 2016 Ny hevitr�izy ireo
Tontosa ny fanambin�i Madagasikara nampiantrano ny fihaonana an-tampon�ny Frankofonia 2016 izay niteraka resabe sy fanehoan-kevitra samihafa manoloana ny fahantrana mianjady amin�ny vahoaka Malagasy.
Nilaza ho afa-po tamin’ny fandraisana sy fikarakarana amin’ny ankapobeny ny OIF na ny fikambanan’ireo tany miteny frantsay ampahany na manontolo nandritra ny lanonana famaranana teny amin’ny CCI (Centre de Conférence Internationale) Ivato ny alahady folakandro teo tamin’ny alalan’ny sekretera jeneraliny Michaelle Jean. Manana ny fomba fijeriny azy iny ihany koa anefa ireto tompon’andraikitra vitsivitsy ireto :
Maharante Jean de Dieu (Minisitry ny asam-panjakana) : «Tombony lehibe ny fahatongavan’ireo filoham-pirenena matanjaka toa an’i Frantsa, ny praiminisitra Kanada na koa i Senegaly teto Madagasikara. Nanampy tosika ny fahafantaran’izao tontolo izao ny firenena Malagasy ny Frankofonia 2016 izay tena ilaintsika. Teboka goavana ihany koa ny hafatra manerantany nataon’ny filoha frantsay François niainga teto Antananarivo».
Rajaonson Mamy (Depioten’i Madagasikara) : «Vokatsoa azo eritreretina ho an’ny firenena Malagasy ny fahitan’ireo tany mpikambana frankofonina ny fampiantranoantsika iny fihaonana tampony andiany faha-16 iny. Hampitombo ny fitokisan’izy ireo an’i Madagasikara ny zavatra vita na dia eo amin’ny lafiny fandraharahana fotsiny aza».
Rakotonirina Gérard (Filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety) : «Fotoan-dehibe ho an’ny mpanao gazety Malagasy ny fitrandraham-baovao mandritra ny fihaonana iraisampirenena toy ny fampiantranoantsika iny Frankofonia 2016 iny, indrindra ho an’ireo izay tsy mbola niatrika izany. Ilaina hatrany mantsy ny fampitomboana ny traikefa sy ny fisokafan’ny serasera amin’ireo mpanao gazety vahiny».